"Caano Qubtay Dabadoodaa la qabtaa, ee waxaa Haboon in 13-ka May ka hor laga hor tago arrintaasi".
Dhawaan ayay ahayd markii Dowladda cusub ee uu madaxda ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay heshiis (is-afgarad) dhanka badda ah la saxiixatay Dowladda Kenya, heshiiskaas oo dhigayay in qayb ka mid ah badda Soomaaliya Dolwadda Kenya muran galisay, ayaa waxa uu dhaliyey qaylo dhaan ka kala imaanayay qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba, waxayna ku tilmaameen in heshiiskaasi uu yahay mid lagu boobayo badda iyo berriga Soomaaliya. Haddaba dadka muhiimka ah ee waxka yiri arrintaasi waxaa ka mid ah Abwaan Maxamuud Warsame Faarax (Bad-Maceeye) oo ka mid ahaa Xildhibaanadii Dowladdii uu C/qaasim Salaad Madaxweynaha ka ahaa.
"Arrintani mid loo dul qaadan karo ma ahan, sababtoo ah haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed waxayna ku waayi karnaa Dhul ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo waliba badda iyo khayraad fara badan oo ku jira dhulkaasi oo manaafacaad badan ugu fadhiya Soomaaliya, Dowladduna ma ahan mid haatan saxiixi karta ama sharciyad u haysata in ay heshiisyada noocaas ah gasho, waayo Dowladdu ma ahan mid shacabku ay soo doorteen balse waa mid loogu talagalay in ay dalka u diyaariso qabashada doorashooyin xor ah, arrinta noocaas ah ee Dowladdu ku talaabsatayna waxaa sababi kartaa in la galo dambi khayaano Qaran" ayuu yiri Abwaan bad-maceeye oo intaa ku daray "caano qubtay dabadoodaa la qabtaa, ee waxaa haboon in 13-ka May ka hor laga hor tago arrintaasi".
Abwaanka ayaa tix gaaban oo gabay ah ku cabiray ra'yigiisa iyo sida ay maanta wax ula muuqdaan, waxa uuna yiri:
IBBI wuxu dhimiyo wuxu dhunshiyo wuxu ku dheeldheelay.
Intad dhabaqdanteen sida tukaha dhacaya guudkeeda.
Dhuunyeeriskii baad hilbaha wada dhaguugteen.